लाप्राक नमूना बस्ती हस्तान्तरण किन हुन सकेन ? «
लाप्राक नमूना बस्ती हस्तान्तरण किन हुन सकेन ?
प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०७६, शनिबार २३:१०
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका कारण गोरखाको लाप्राकस्थित नमूना बस्ती भूकम्पपीडितलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रोकिएको छ ।
वैशाख १२ को अवसर पारेर भूकम्प प्रभावितलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहे पनि राष्ट्रपति भण्डारी अघिल्लो दिन नै चीन प्रस्थान गरेका कारण कार्यक्रम स्थगित भएको हो । गैर आवासीय नेपाली संघले निर्माण गरेको यो नमूना बस्तीमा ५७३ वटा घर रहेका छन् ।
संघले नेपालमा गएको महा विनाशकारी भूकम्पको चौथो वर्षको अवसर पारेर गोर्खाको धार्चे गाउँपालिकाको गुप्सीपाखामा निर्माणाधिन लाप्राक नमूना वस्तिको अवलोकनका साथै लाभ ग्राहीहरुसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ।
संघका अध्यक्ष भवन भट्टले भुकम्प पीडि तको लागि निर्माण भएको नमुना बस्ती छिट्टै विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर हस्तान्तरण गरिने बारे जानकारी दिए । भट्टले वस्ती बनेको गुप्सीपाखामा सामुदायिक भवन लगायतका अन्य संरचना, पूर्वाधार आदिका कुराका लागि पहल भईरहेको बारे अवगत गराए । नमूना बस्तीको रंगरोगन सहित बाह्य संरचनाको सम्पूर्ण काम सकिएको छ । निर्माण कार्यमा नेपाली सेनासमेत संलग्न छ ।
लाप्राकमा ५७३ घरको निर्माण सकिएर अन्तिम चरणको संरचनागत विकासको काम भइरहेको छ । प्रतिकुल मौसम र भौगोलिक विकटताको कारणले सो परियोजना निर्माणमा ढिलाई भए पनि अब सम्पन्न हुने क्रममा रहेको भट्टको भनाइ छ ।